Cha cha Fastpay - Ego ọhụụ na koodu mgbasa ozi (koodu ntinye) 2021
Banyere cha cha
Fastpay cha cha - ego na koodu mgbasa ozi
Na Fastpay Casino, a na-enye onyinye n'ụzọ dịtụ iche. O nwere ike ịdị ka ndị ọrụ na - enweghị uche na amụma ego nke saịtị ahụ pere mpe, mana nke a abụghị ụgha. Maka ndị ọrụ ya, ndị na-ahazi ụlọ ọrụ a ewepụtala ụzọ ọhụụ ọhụụ si agbalite mmemme agbamume ahụ.
Akụkụ nke usoro ego bụ na ọnụ ọgụgụ ụgwọ ọrụ na-agbanwe na usoro nke ịbawanye ọkwa nke onye ịgba chaa chaa na mmemme ịgba chaa chaa Fastpay . Maka ndị ọrụ edebanyere aha ọhụrụ, nchịkwa saịtị ahụ na-enye ngwugwu mmalite, ma na-enye ndị egwuregwu oge ohere isonye na mmemme VIP.
Ebido ụdị onyinye ego Portal niile dị maka onye ọrụ ọ bụla site na otu adreesị IP, ngwaọrụ nkeonwe, nọmba ekwentị na akaụntụ nke onwe nke usoro ịkwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na onye ahịa ya gbalịa ịgabiga iwu dị otú ahụ, sistemụ ahụ ga-egbochi nguzozi ya ma jichie ego niile dị ya. Nzọ nzọ niile ejiri ego sitere na akaụntụ bonus anaghị emetụta ọnọdụ emere na mmemme VIP, n'ihi na a na - emeziwanye ya site na igwu egwu ezigbo ego.
Otu ego nkwụnye ego nwere ike ịrụ ọrụ n'otu oge, n'ihi na enweghị ike ijikọta ha. N'oge egwuregwu ahụ, a na-ebu ụzọ kwụọ ụgwọ site na nguzozi nke onye ahịa, wee site na akaụntụ nnabata. A na-enye ego efu na opekempe kacha nta. A na-ekpochapụ ego izizi na nke abụọ maka ịgba x50. Maka ụfọdụ, ọnụọgụ ọnụọgụ a nwere ike ịdị ka ọ karịrị akarị, mana ekwesiri iburu n'uche na enweghị oke oke na ụdị onyinye a, nke na-eme ka ọ bụrụ mmesapụ aka na uru maka ndị ịgba chaa chaa.
Ego nkwụnye ego mbụ dịka nkwalite nnabata
ego nkwụnye ego bụ 25 FS, na onyinye ụbọchị ọmụmụ ga-abụ 50 FS. Malite na ọkwa nke anọ, ndị na-agba chaa chaa nwere ike ịghọta ekele maka mmesapụ aka nke ụlọ ọrụ ahụ, na-anata ọ bụghị naanị onyinye ndị edepụtara n'elu, nke buru ibu karịa, kamakwa ego Reload.
Na mgbakwunye na mkpali ndị edepụtara, ndị ọrụ na nke ise na-enweta ohere pụrụ iche iji gbanwee isi ihe ndị akwụpụtara maka ezigbo ego otu ugboro n'afọ. Malite na ọkwa nke itoolu, ndị egwuregwu malitere ịnata 10% nke ego ejiri, na mgbakwunye na ikike niile dị n'oge ahụ. VIP ọkwa na-egosi nchịkọta nke onyinye niile edepụtara site na ụlọ ọrụ ahụ.